N'èzí egwuregwu okpu emepụta - China N'èzí Sports okpu Factory & Suppliers
N'èzí UPF 50 + Fishing Sun Cap na Olu Flap
Kwadebe maka njem: you na-achọ nke zuru oke oime ụlọ sun cap ka elu gị adventurous ekike n'ihi na gị ọzọ azu, ịchụ nta, ma ọ bụ maa ụlọikwuu njem. Chọtara ya. Nke aoime ụlọ sun cap bara uru, kuru ume, fechaa, ma di nma - na nkenke, ihe obula ihe mkpuchi nwere adi.
Ihe n'èzí: Ma ị na-eme atụmatụ ịga ịkụ azụ n'ime ọdọ, ịchụ nta n'ọhịa, ma ọ bụ naanị ịchọrọ ịkpụ azụ ma nwee obi ụtọ n'èzí nwere okpu oyi na aka, okpu a dị egwu ga-ejide n'aka na ị ga-ewepụ anya na anya gị ma gbochie anwụ na-acha.
Adịchaghị Ogo: Mgbe a bịara nke anyị n'èzí azu anwụ okpu, anyị na-etinye aka na iji ihe ọ bụla ma ọ bụghị naanị ihe ndị kachasị mma, yana usoro mmepụta nke ọgbara ọhụrụ na njikwa njikwa mma.
Ntị na olu nchedo mkpuchi: yana oke nku ya, a n'èzí azu anwụ okpu Enwekwara mpempe akwụkwọ na-echekwa anwụ nwere ike ikpuchi azụ gị na ntị gị, ma gbochie iwe iwe na anwụ anwụ na-acha ogologo oge.
UPF 50 + N'èzí na-agba ọsọ na-agba ọsọ Cap okpu egwuregwu okpu maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị
Ihuenyo: nwere 50+ UPF iji gbochie ụzarị ọkụ UV ma nyere aka kpuchie akpụkpọ gị, Ihe pụrụ iche na mkpuchi UV nke gafere ule UPF 50 +. nke bụ ezigbo UV echebe. Ejikọtara ya na Wide na Long Visor Design, Isi gị, Ihu, Imi na N'olu nwere ike kpuchie nke ọma. Ọ na-echebe gị site na anyanwụ ọkụ ka mma. Ngwa ngwa iku ume: Site n'itinye super ìhè na mmiri wicking ákwà na oke ntupu imewe, na-ewetara gị a otutu nke jụụ na ala. Okpu okpu nwere ike ihicha ngwa ngwa mgbe ịsachara
N'èzí Windproof Hiking okpu na mbughari ntupu ihu olu flaapu Cover
Okpu mkpuchi okpu sara mbara nke okpu mkpuchi nwere ikuku mmiri na-apụghị iku ume maka njem njem
Adịchaghị Polyester: A na-eme okpu anwụ dị ọcha nke polyester kachasị mma, nke bụ ọyị na-adị mma ma dị mma, ma na-enyekwa ngwa ngwa ngwa ngwa maka ịbịaru ụbọchị niile.
Nchedo Anyanwu: Okpuru anyanwu na-achoputa ugwo ogologo na akuku olu gbara ya gburugburu, na-enye nchebe anyanwu ma chebe akpukpo aru site na ihe ojoo na emebi UVA / UVB